भारतीय न्यूज च्यानल बन्द गरेकोमा सरिता गिरी र पत्रकार किशोर नेपाल ले गरे बिरोध !
पूर्व सांसद सरीता गिरिले भारतीय च्यान नेपालमा बन्द गरेकोमा आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले सबै च्यानललाई एउटै नजरले हेर्ने कुरा गलत भएको बताएकी हुन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय सरिता गिरिले आज आफ्नो बिचार व्यक्त गरेकी हुन् ।
पत्रकार किशोर नेपालले पनि भारतीय च्यानल बन्दको बिरोध गरेका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, के यो पागलहरूको बस्ती हो ? कडा रोक अश्लिल सामग्री प्रसारणमा लगाउ समाचार र विचारलाई रोक्ने होइन । निर्णयलिंदा बिबेक नगुमाउ । यो बस्ती पागलहरूको होइन । तानाशाही मू’र्दावाद मू’र्दावाद मू’र्दावाद ।
किशोरकै उक्त ट्वीट रिट्वीट गर्दै सरिता लेख्छिन्, हामी भारतीय च्यानल बन्द गरेको बिरुद्धमा छौं, सरकारलाई कुनै समस्या भए कुटनैतिक पहलबाट समाधान गर्न सक्छ । उनको यो बिचार प्रति धेरैको प्रतिक्रिया आएको छ । धेरैले उनलाई गाली गरेका छन् भने केहीले भने उनलाई समर्थन गरेका छन् ।
नेपालमा भारतीय न्यूज च्यानल हेर्न नमिल्ने बनाइएको भन्दै सबैतिर यसको स्वागत भएको छ । नेपालले भारतद्धारा अतिक्रमित जमिन लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतमा त्यस विरुद्ध कोकोहोलो मच्चिएको छ । भारतको विरोधका बावजुद संसदवाट संविधान संसोधनको प्रस्ताव पारित भएर नया नक्सा निसान छापमा पनि समेटिएपछि भारतीय मिडिया थप उग्र भएका छन् ।
Prevप्रधानमन्त्री ओलीले यातायात व्यवसायीलाई भने ढुक्क हुनुहोस्, सरकारले माग पुरा गर्छ
Nextसभापति देउवाको विभाग गठनप्रति वरिष्ठ नेता पौडेलको आपत्ति